ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရန်ကုန် ဘူတာကြီးအတွင်း အရက်မူးပြီး ခရီး သည်များကို အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေ သော သင်္ကန်းဝတ်တစ်ဦးကို လူဝတ် လဲကာ တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ ''အရက်မူးးပြီး ခရီးသည်တွေ ကို ဆဲဆိုသောင်းကျန်းနေတာ။ မြို့ နယ်သံဃနာယကရယ်၊ ထွေအုပ်ရယ် အဖွဲ့စုံစစ်ဆေးထိန်းသိမ်းပြီး လူ ဝတ်လဲပေးခဲ့ပါတယ်။ သာသနာညှိုး နွမ်းစေမှုနဲ့ တရားစွဲထားပါတယ်''ဟု ရန်ကုန်ဘူတာကြီး မီးရထားရဲ တပ်ဖွဲ့စခန်းမှူး ရဲအုပ်ကြည်ဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်က ပြောသည်။ ...
IN: Others BY: NT/WY 22 Jan, 2019
ဒါဗို့စ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၂၆ ဦးတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးလူသားများထက်ဝက်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ညီမျှကြောင်း Oxfam အဖွဲ့က ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယင်းအဖွဲ့က အစိုးရများကိုလည်း ဝင်ငွေမညီမျှမှုလျော့ပါးရန်အတွက် ချမ်းသာသူများထံမှ အခွန်များတိုးမြှင့်ကောက်ခံကြရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
IN: Business BY: M Bwe 22 Jan, 2019
IN: Life BY: TTHL 22 Jan, 2019
ပညာရေးပေါ်လစီ အချို့ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ဖြစ်သော်လည်း ခေါက်ရိုးကျိုးနေသူ များနေခြင်းကြောင့် အကောင်အထည် မပေါ်သေးဟုဆို
IN: Life BY: HWA 22 Jan, 2019
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် နောက်ဆုံးနေခဲ့သည့် အိမ်ပုံစံအတိုင်း ပြန်လည် တည်ဆောက်မည်
IN: Others BY: HWA 22 Jan, 2019
IN: Political BY: NT 22 Jan, 2019
၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာရေးဆွဲရန် မြို့နယ်ပါတီကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းမည်
IN: Political BY: AHO 22 Jan, 2019
အသွင်ကူးပြောင်းရေး နုနယ်သေးသည့် အခြေအနေတွင် ဒီမိုကရေစီ စံညွှန်းသို့ ရောက်ရန် ဆက် အားထုတ်ရဦးမည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဆို
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို မျှနိုင်သည့် ခေါင်းဆောင်မှုမျိုး ယခုအစိုးရတွင် မရှိဟု ဒီချုပ်အမတ် ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဝေဖန်
တိုင်းရင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဝမ်းမြောက် အားတက်မိခြင်းနှင့်အတူ စိန်ခေါ်မှု မည်မျှကြီးမားသလဲ ဆိုသည်ကိုလည်း ပြန်သတိရမိဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဆို
ကလေးမြို့ မြို့တည်နှစ် ၁ဝ၅၂ နှစ်ပြည့်ပွဲတော်ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်
စစ်ကိုင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့ မြို့တည် ၁ဝ၅၂ နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပွဲတော်ကို နှစ်သက်တမ်း ၁ဝဝဝကျော်ရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ လှည့်လည် ပူဇော်ပွဲနှင့် ပျော်ပွ...
IN: Regional BY: MOS 22 Jan, 2019
ကိုးလအတွင်း တာချီလိတ် နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည် ၈၄၇ဝဝဝ ကျော် ဝင်ရောက် လည်ပတ်
မလှိုင်မြို့တွင် လူတစ်ဦး ယာဉ်တိုက်မိသဖြင့် သေဆုံး၊ ယာဉ်မောင်းကို နာရီပိုင်းအတွင်း ဖမ်းမိ
ဘုရားကြီး တောင်ဘက်စောင်းတန်း၌ သန့်စင်ခန်းဟောင်းများဖျက်၍ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသန့်စင်ခန်းများ တည်ဆောက်
DKBA ခွဲထွက် အဖွဲ့မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ တစ်ဦးအပါအဝင် ၁၁ ဦး နယ်မြေခံ တပ်ရင်းတစ်ခုသို့ လက်နက်များနှင့်အတူ အလင်းဝင်ရောက်
မင်းတုန်းမြို့နယ်တွင် အထောက်အထားမဲ့ ဝင်လာသော ဘင်္ဂါလီ ၁၅ ဦး ဖမ်းမိ
IN: Business BY: TTMT 22 Jan, 2019
ဓာတ်အားခ လွန်စွာ နည်းသောကြောင့် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၌ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရဲဝံ့စွာခြေမချရဲဖြစ်နေ
မန်းရွှေစက်တော် တည်းခိုခန်းခများ သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက် ပိုမပေးရန် ဂေါပက ဥက္ကဋ္ဌပြော
အလီ ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းက ပိုချက်တီနိုအတွက် နောက်ထပ် ခေါင်းခဲစရာဖြစ်လာ၊ ချဲလ်ဆီးနှင့်ပွဲအမီ ကွင်းလယ်လူမော်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုပြန်ရလာမည်ဟု ပြောဆို
စပါးနည်းပြ ပိုချက်တီနိုက ဖူလ်ဟမ်နှင့်ပွဲမှ ကွင်းလယ်လူအလီ၏ ဒဏ်ရာအ ခြေအနေမှာ စိုးရိမ်ရခြင်း မရှိစေရန် မျှော်လင့်ထား သော်လည်း ယခုဒဏ်ရာမျိုး မှာ ဂရုပြုရမည...
IN: Sport BY: KKW 22 Jan, 2019
စီရော်နယ်ဒို၊ ရွန်းနီတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ရက်ဖို့ဒ်အား ဆိုးလ်ရှား ချီးကျူး
ပွဲမကစားမီ နေ့ရက်တိုင်း ဒဲလ်ဂလစ်ရ်ှက မက်ဆေ့ခ်ျပို့ကြောင်း ဗန်ဒစ် ဖွင့်ဟ
ဘရိုနာကို အနိုင်ယူပြီး ဝယ်လ်တာဝိတ် ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ပက်ကွီအိုဆက်ထိန်း၊ ကြိုးဝိုင်းအတွင်း မေဝယ်သာပြန်လာပါက ပြန်လည် ထိုးသတ်လိုသည် ဟုဆို
ဂွါဒီယိုလာနှင့် ကလော့ပ်တို့ကဲ့သို့ ထောက်ပံ့မှု မရခဲ့ဟု မော်ရင်ဟို ဝေဖန်
IN: World News BY: M Bwe 22 Jan, 2019
ရေတွင်းထဲတွင် ခြောက်ရက်ကြာ ပိတ်မိနေသော ကလေးငယ်ထံ ရောက်ရှိရန် စပိန်ကယ်ဆယ်ရေး သမားများ ကြိုးပမ်းနေ
အစ္စရေးကျောင်းသူ အသတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် လမ်းမများထက်တွင် အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံမှုရှိစေရေး သြစတြေးလျ၌ စုရုံးဆန္ဒပြ
ဆိုမာလီတွင် အမေရိကန်တို့၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အယ်လ်ရှာဘတ် အစွန်းရောက် ၅၂ ဦးကို သုတ်သင်နိုင်ခဲ့
အမေရိကန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ ဒုတိယအကြိမ် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်
မက္ကဆီကိုတွင် လောင်စာပိုက်လိုင်း မီးလောင်၊ လူ ၂၀ သေဆုံး၊ ၅၄ ဦး မီးလောင် ဒဏ်ရာံရ
Netflix ၏ ပထမဆုံး ကိုရီးယားဒရာမာ 'Kingdom' မကြာမီပြသမည်
IN: Entertainment BY: ၀ိုင်နေ 22 Jan, 2019
'Rambo' ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ ဗတ်ခ်ျနာ ကွယ်လွန်
ဟွန်ဘင်းနှင့် ဆွန်းယယ်ဂျင်းတို့ အချစ်ရေး ကောလာဟလသတင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထွက်ပေါ်လာ
''ဒီနှစ်ဆို အကဲဖြတ်အဖွဲ့ကနေ ကြောက်လို့ ပြေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ကားတွေက ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တာကြောင့် ကြောက်လို့ ပြေးကြတာ'' ဒါရိုက်တာ ကြည်စိုးထွန်း
'လေးပါးကျော့ရှိန် ဝရဇိန်' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မကြာမီ ရုံတင်မည်
မြတ်လှိုင်း -------------- ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အတူ&nb...
IN: Articles BY: မြတ်လှိုင်း 18 Jan, 2019
ရွှေကူမေနှင်း ----------------- ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောက်မေ့ဖွယ် မှတ်မိသမျှ အမှတ်တရလေးတွေရေးခြင်းကို Memo...
IN: Articles BY: ရွှေကူမေနှင်း 18 Jan, 2019
'ခွင့်တူညီမျှ ဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေ' နိုင်ငံတော်သီချင်းထဲက စာသား လေးပါ။ လူတန်းစားမခွဲခြားဘူး၊ လူမျိုးရေးမ...
IN: Articles BY: Yangon Media Group 18 Dec, 2018
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပြည်ပခရီးသွားများ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြမည့် ''သွေးချင်းတို့ရဲ့ ...
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ပညာရေး ပေါ်လစီအချို့ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ခေါက်ရိုး ကျိုးနေသ...
ဘားအံ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့အနီးရှိ သဘာဝထုံး...
IN: Life BY: KKTM (MWD) 22 Jan, 2019
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရှေး ဟောင်းအမွေအနှစ်များမရှိသော ပုဂံဒေသရှိ လူနေရပ်များတွင် 'စည်ပင်ဥပဒေ' ဖြင့်...
IN: Life BY: TTHL 21 Jan, 2019
အောင်လံ၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့် ဧရာဝတီမြစ်၌ ငါးတေ...
IN: Life BY: HT 21 Jan, 2019
ပဲခူး၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ တောဆင်ရိုင်းများကို ရေဒီယို ...
IN: Life BY: AA 21 Jan, 2019
မသန်စွမ်းသူများ အတွက် အလုပ်အကိုင်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် လိုနေသေး
IN: Others BY: MP 22 Jan, 2019
မြဝတီ ပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်း ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် နေရပ်ပြန် အလုပ်သမား ၃ဝဝဝ ခန့် သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းရှိ ၉၉၉ ဂိတ်မှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခဲ့
ဆန်စပါး အစိုဓာတ် တိုင်းတာခြင်းအပေါ် နောက်ကြောင်းပြန် ခြေရာခံစနစ် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည်
နေ့စားလပေး ပညာရေးဝန်ထမ်းများကို အမြဲတမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ရေး လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
မြိတ်တွင် အထုပ်တင်လာသော ဆိုင်ကယ်ကို စစ်ဆေးရာမှ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်မှု ပေါ်ပေါက်
ယူနန်နေ့စဉ် သတင်းစာနှင့် Myanmar News Network Company Limited တို့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး